ကြုံခဲ့သမျှ ၊ ဆုံခဲ့သမျှ. | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ရောက်တတ်ရာရာ » ကြုံခဲ့သမျှ ၊ ဆုံခဲ့သမျှ.
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 3:38 PM
Posted by မိုးသက် at 3:38 PM Read more
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) April 7, 2012 at 9:18 PM
တိုင်းရင်းသားတွေ ကောင်းကြောင်းပြောသလိုလိုနဲ့ သူရုပ်ချောတာကို ကြော်ငြာသွားတာကိုးး)
စကားမပီတာတွေ ဖတ်ပြီး ရယ်ရတယ်။
ဟုတ်တယ် အဲလို နယ်ဘက်က သူငယ်ချင်းတွေ ရှိဖူးတယ်.. ခင်ဖို့လည်း ကောင်းကြတယ်
မေမြို့မိုးပြောသလိုဘဲ နယ်သူနယ်သားတွေက ရိုးသားပွင့်လင်းကြတယ်
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် April 7, 2012 at 11:17 PM
တိုင်းရင်းသားတွေ ချောတယ်ဆိုတာတော့ လက်ခံတယ်
မြတ်ကြည် April 7, 2012 at 11:54 PM
လက်စသတ်တော့ ငါ့မောင်က သူများ အကြောင်းပြောသလိုလိုနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကို ကြော်ငြာဝင်သွားတာကိုး။ ရန်ကုန်က မုန့်တီက အရည်နဲ့ မုန့်ဟင်းခါးတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ ရခိုင်မုန့်တီကို အတိုခေါက် ခေါ်တာ။ မန္တလေးက မုန့်တီဆို နန်းကြီးသုတ်ပဲ။
Snow May April 8, 2012 at 12:13 AM
အစ်မကတော့ ရှ နဲ့ ချ မပီလို့ Undergrad တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ စတာအရမ်းခံခဲ့ရဖူးတယ်.. သူတို့စ ပါများတော့ အခုပီသွားပြီ. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဒေသရဲ့ အထိမ်းအမှတ် စကားမပီတာတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲသလိုဖြစ်သွားတော့ နှမြောမိသလိုပဲ.
Anonymous April 8, 2012 at 2:10 AM
သားက မန်းလေးနယ်သားဆိုတော့ စည်းလုံးတယ်ပေါ့ သားကောင်မလေးက တောင်ပေါ်သူ ကပြားလေးဆိုတော့ ချောတယ်..သားလည်းချောတယ်နော် သူ့ လိုပဲ ကိုဘက်ကိုပြန်ရေးတာ...
ချောကလက်ကျူးပစ်လေး April 8, 2012 at 7:47 AM
အလွမ်းခရီးသည် April 9, 2012 at 12:31 AM
အတော်လေ့လားထားတာပဲ။ လိပ်ကြီး..သူ့ဘက်သူယက်သွားတယ်။ မိုးသက်ပြောသလိုဆို မေလဲ တစ်ခုမှ မလွတ်ဘူး။ ဟိ ဟိ စကားပြောရင် ရှနဲ့ဆ မကွဲဘူး။ ပြောမတတ်ဘူး။ လုပ်မတတ်ဘူး။စားမတတ်ဘူး။ မုန့်တီ..မုန့်တီဖတ်။.ရန်ကုန်မှာတော့ မုန့်ဟင်းခါး၊မုန့်ဟင်းခါးဖတ်ခေါ်တယ်လေ။ ပြောရရင် ကုန်တောင်ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး.။စကားကလဲ ဝဲသေးတယ်။
ချစ်စံအိမ် April 9, 2012 at 1:50 PM
စံပယ်ချို April 11, 2012 at 10:05 AM
တွတ်တွတ် April 11, 2012 at 12:45 PM
ကျွန်တော်တို့.ရှမ်းမြောက်ကတော့..သ နဲ့ တ ကိုမပီတာဗျ....တေတောတူတီ...တုတ်တန်တို့တွားတီ..ပေါ့ဗျာ...
jerry pigpig April 12, 2012 at 11:52 AM
ရ သံနဲ့ ခ သံမကွဲတာထင်တယ်..
ဟဲဟဲ..အရင်တုန်းက မေမြို့မိုး (M 3)ရဲ့စီနီယာ အကို
မေမြို့မိုး=May Myo Moe (M 3)
panzarphyu April 23, 2012 at 9:32 PM
မေမြို့မိုး အမေကို မေးကြည့်လိုက်တာ အမေချောသလောက် ဒီသားကျမှ အမေ့ကို တစ်စက်ကလေးမှ ချောတာ မမှီဘူးတဲ့........:P
နယ်တွေအလိုက် အသုံးအနှုန်းလေးတွေ ကွဲလွဲသွားတာက နားထောင်လို့ကောင်းသလိုလို
တစ်ခါတစ်ခါတော့ ရယ်ရပြန်တယ်ဗျ အပေါင်းအသင်းလည်း တယ်စုံသကိုး ။
မေမြို့မိုး January 28, 2013 at 3:07 AM
အစ်ကို့ကိုလည်း မြင်ဖူးနေတာကြာပါပြီ.။ အန်တီတင့် ဓါတ်ပုံထဲမှာ တွေ့ဖူးပါတယ်